I-LNG Liquefaction Plant Factory | I-China LNG Liquefaction Plant Manufacturers, Suppliers
Isitshalo esincane se-LNG sika-1 kuya ku-2 MMSCFD
Ilungele ukusetshenziswa kwemibhede emincane yegesi, igesi ye-shale, i-flare gas, i-methane, i-biogas, kanye nemithombo yegesi yemvelo eyihlane. Lezi zidinga idivayisi yohlobo lwegesi yemvelo ekhwezwa kakhulu eshushuluzayo. Inezinzuzo zokutshalwa kwezimali okuncane, izindleko eziphansi, ukufakwa kalula, ukudluliswa kalula, indawo encane yokuhlala kanye nokubuyiswa kwezindleko ngokushesha.
Inqubo yesitshalo ye-LNG eyenziwe ngokwezifiso noma i-LNG liquefaction plant
Inqubo yegesi yemvelo liquefaction ihlanganisa pretreatment (ukuhlanzwa) igesi eluhlaza, liquefaction, refrigerant circulation compression, ukugcinwa komkhiqizo, ukulayisha kanye nesistimu eyisizayo, njll inqubo eyinhloko ihlanganisa ukuhlanzwa kwegesi eluhlaza kanye nokuchithwa kwegesi ehlanzekile.
Amayunithi okukhiqiza we-3MMSCFD LNG ahlanganisiwe kanye nenqubo yesiqandisi ye-LNG
Umkhiqizo wale yunithi i-liquefied natural gas (LNG).Ngokwezingxenye zegesi ephakelayo ehlinzekwa umnikazi, ukubala kwenqubo kwenziwa kusetshenziswa isofthiwe yokubala yenqubo ethuthukisiwe.
Izici zomkhiqizo we-LNG ziboniswa kokulandelayo.
9 I-MMSCFD yesiko LNG Liquefaction Plant
Imvelo ye-LNG a) Ukubunjwa kwe-LNG/LCBM ingxube ye-hydrocarbon ene-methane njengengxenye eyinhloko, equkethe inani elincane le-ethane, i-propane, i-nitrogen nezinye izakhi ezivame ukuba khona kugesi yemvelo. Ngokuvamile, okuqukethwe kwe-methane ku-LNG/LCBM kungaphezu kuka-80% kanti okuqukethwe kwe-nitrogen kungaphansi kuka-3%. Nakuba ingxenye eyinhloko ye-LNG kuyi-methane, izakhiwo ezingokomzimba nezamakhemikhali ze-LNG azikwazi ukuthathwa nge-methane emsulwa. Isakhiwo somzimba kanye ne-thermodynamic ...
Igesi yemvelo Liquefaction skid
I-Liquefaction gas yemvelo, maduze ebizwa nge-LNG, ijiya igesi yemvelo ibe uketshezi ngokupholisa igesi yemvelo eyigesi ngaphansi kwengcindezi evamile ukuze - 162 ℃. I-liquefaction yegesi yemvelo ingasindisa kakhulu indawo yokugcina neyokuthutha, futhi inezinzuzo zevelu enkulu ye-calorific, ukusebenza okuphezulu, okuhambisana nebhalansi yokulawulwa komthwalo wasemadolobheni, okuhambisana nokuvikelwa kwemvelo, ukunciphisa ukungcoliswa kwedolobha nokunye..
10~30 × 104I-Nm3/d I-Liquefaction Enkulu ye-LNG
I-liquefaction yegesi ingasindisa kakhulu indawo yokugcina neyokuthutha, futhi inezinzuzo zenani elikhulu le-calorific, ukusebenza okuphezulu, okuhambisana nokulinganisela kokulawulwa komthwalo wasemadolobheni, okulungele ukuvikelwa kwemvelo, ukunciphisa ukungcoliswa kwedolobha nokunye.
ngokwezifiso 50×104m3 / D igesi yemvelo liquefaction plant
Amayunithi enqubo eyinhloko ahlanganisa i-feed gas pressurization, i-decarbonization unit, i-dehydration unit, i-mercury neyunithi yokususwa kwe-hydrocarbon esindayo, iyunithi ye-liquefaction, isitoreji sefriji, i-flash steam pressurization, ipulazi le-LNG ithangi kanye nezindawo zokulayisha.
Itheminali yangokwezifiso ye-LNG yokuncibilika kwegesi yemvelo
Itheminali ye-LNG iyinhlangano ephilayo ehlanganiswe nemishini eminingi efanele. Ngokubambisana kwalezi zisetshenziswa, i-LNG ethuthwa olwandle ingagcinwa ethangini lokugcina le-LNG futhi ithunyelwe kubasebenzisi ngokugeleza kwenqubo ethile. Lezi zisetshenziswa zihlanganisa ingalo yokulayisha, ithangi lokugcina, iphampu yokudlulisa ingcindezi ephansi, iphampu yokudlulisa ingcindezi ephezulu, i-carburetor, i-bog compressor, i-Flare Tower, njll.
1~5 × 104I-NM3/D ENKULU YE-LNG I-LIQUEFACTION
Indawo yokuthungela ye-LNG iphakeme ngo-230 ℃ kunaleyo kaphethiloli futhi iphakeme kunelikadizili; Umkhawulo wokuqhuma kwe-LNG uphakeme izikhathi ezingu-2.5 ~ 4.7 kunophethiloli; Ukuminyana kwesihlobo se-LNG cishe ku-0.43 kanti ekaphethiloli cishe ku-0.7. Ilula kunomoya. Ngisho noma kukhona ukuvuza okuncane, kuzoshintshashintsha futhi kusakazeke ngokushesha, ukuze kungashi ngokuzenzekelayo noma kuqhume noma yakhe umkhawulo wokuqhuma kokuqhuma uma kwenzeka kuba nomlilo. Ngakho-ke, i-LNG ingamandla aphephile.
Isisetshenziswa esincane se-LNG Liquefaction Plant
I-LNG Liquefaction Plant iwumshini wokukhiqiza igesi yemvelo ewuketshezi, okuwuhlobo lwegesi yemvelo enguketshezi egayiwe ngaphambili futhi yafakwa uketshezi ngezinga lokushisa eliphansi. Uma kuqhathaniswa negesi yemvelo evamile, inenani eliphakeme lokushisa nokuhlanzeka, okulungele ukugcinwa nokuhamba. Ekuthuthukisweni kwemboni yegesi yemvelo, igesi yemvelo ewuketshezi izoba yingxenye ebalulekile yayo kanye nesithasiselo esibalulekile epayipini legesi yemvelo.